लभ एन्ड डेथ इन काठमान्डु - विकिपिडिया
मार्क व्हिट्टेकर तथा एमी विल्लेसि
प्यान माकमिल्लान अस्ट्रेलिया प्रा. लि. तथा राइडर बुक्स
लभ एन्ड डेथ इन काठमान्डु (Love and Death in Kathmandu) अस्ट्रेलियन दम्पति "एमी विल्लेसि" तथा "मार्क व्हिट्टेकर" ले लेखेका किताब हो। यस किताब मा जेष्ठ १९, २०५८ को नेपाल दरबार हत्याकाण्डको बारे लेखिएको छ। यस किताबले नेपाल दरबार हत्याकाण्डको भित्रि कथालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गरेको छ। यस किताबले सन् २००२ मा "Asia-Pacific Travel Writing Award" जीतेको थियो।
२ किताबका पाठहरु
यस किताबको लेख नेपालको एक गाउँ, दोलखा, मा घटेको एक घटना बाट शुरु हुन्छ। यस घटनाको विवरण यस प्रकारले दिएको छ: दोलखाको ५५० वर्ष पुरानो दोलखा भीमसेन देउताको मुर्ति बिना कारण पसिना चुहाउन थाल्छ। इतिहासको अनुसार यो साह्रै नै नराम्रो संकेत हो। लेखको अनुसार, पछिल्लो पटक मुर्तिले यसरी पसिना चुहाउँदा वि.स. १९९० सालको भुकम्प गएको थियो। जब पनि यस मुर्तिले पसिना चुहाउँछ, कुनै न कुनै नराम्रो घटना घट्छ भनेर विश्वाश गरिन्छ। यसै गरी अरु पनि प्रलयको संकेतहरु देशभर देखा परि रहेको थियो। गोर्खामा बादल नभएको आकाशबाट पानी परेको समाचार, काठमाडौंको कुमारी ( जीवित देवी) को अनुहारमा खटेरा आउनु, सबै केहि प्रकारको प्रलयको संकेत गर्दै थियो। अन्तमा नेपाल राजपरिवारको हत्या हुनपुग्यो।
लेखकहरुका अनुसार यहि घटना र यस घटना सँग जोडिएको कथाले नेपाल आई यस कथा लाई पछ्छ्याउन तान्निएका थिए। लेखकहरुले यस किताबमा आफ्ना यात्राको शुरुवात काठमाडौंको कुमारी ( जीवित देवी) बाट गर्छन्। कुमारीको छान्ने बेलामा गरिने पुजा तथा त्यस बेलाको परीस्थिति र गतिविधिको बारे पनि किताबको यस पाठमा बताइएको छ। कुमारीका बारे यस किताबमा वर्णण गरिएको तरिकाले देखाउँछ कि कुमारी र राजपरिवारको निकै पुरानो तथा घनिष्ट सम्बन्ध छ। यस पछि किताबले माओवादी र त्यसबेलाको माओवादीले गरेका घटनाहरू तथा नेपाल बन्दका कुरा गरेको छ। लेखकहरु एक माओवादी लडाकु सँग पनि भेटघाट गरेका बताईएको छ। लडाकुका अनुभति तथा उनी के का लागी माओवादी छिरेका थिए र किन बाहिरिए भन्ने कुराको बयान गरिएको छ। साथै त्यस बखतमा पटक-पटक भइरहने नेपाल बन्दका कारण लेखकहरुका धेरै भ्रमणहरुमा बाधा पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै बन्दका दिनहरुको बिच एक सैनिक क्यप्टेनले पनि किताबको लागी बयान दिन राजी हुँदै निमन्त्रणा गरिएको पनि थियो। यस भेटघाटले यस किताबमा एक सैनिकका आवाज पनि थपिदिएको छ। किताबमा लेखिएको यस सैनिक क्यप्टेन संगको कुराकानी अनुसार सैनिकहरुलाई पनि आफ्नै देशवासी लाई मार्न कुनै रहर थिएन। यस्तै भावमा कुरा गर्दै यस सैनिक क्यप्टेनले उनको अनुभुतिहरु जनाइएको छ।
चौथौँ पाठमा गोरखा र त्याहाँको इतिहासको बारे लेखिएको छ। यहिँ बाट पृथ्वी नारायण शाह र उनका काठमाडौं शहर (त्यस बेलाको नेपालय देश) आफ्नो बनाउने ईच्छाको बारे बताइएको छ। साथै नेपालको जातीय भेदभाव, विषेश गरि बिहेका कुरामा, बताइएको छ। यो विषय जोडिएको कारण सपष्ट रुपमा राजकुमार दिपेन्द्र र उनका बिहेको बारे चलिरहेको तकरारलाई अझ सपष्ट रुपमा देखाउन देखिन्छ।
यसै गरि यस लेखमा नेपाली इतिहास तथा समाजका धेरै कुराहरु, जुन कुनै पनि रुपले राजपरिवार अथवा राजपरिवार हत्याकाण्डसँग जोडिएको छ, त्यस्को बयान गरिएको छ। जस्तै, यस किताब मा नेपाली समाजमा राजपरिवार तर्फको विचार, राजकुमार दिपेन्द्र, पारस तथा राजपरिवारका अरु सदस्यहरुका व्यवहार तथा क्रियाकलाप देखि लिएर राणा शाशनको उदय र गिरावट सम्मको बारे लेखिएको छ। राजपरिवारका विभिन्न टाढाका सदस्यहरु सँग स्वर्गिय राजा तथा रानीको आफ्ना सन्तानहरु सँगको सम्बन्धको बारे सोधपुछ गरिएको छ। यसै सोधपुछका कथाहरुको साथमा किताब पहिलो भाग बाट दोस्रो भागमा पुग्छ।
दोस्रो भागको शुरुवात राजकुमार दिपेन्द्रको जन्मको निश्चित दिन र समयबाट हुन्छ। यसै बाट दिपेन्द्रको बाल्यकाल, तन्नेरी जीवन तथा इंग्ल्यान्डको इटन कलेजमा पढाइ गर्दाको दिन हरुको वर्णण गरिएको छ। यस वर्णणमा दिपेन्द्रको दुईटा भिन्न व्यक्तित्वको बारे पनि बताइएको छ -- एउटा सरल र चाखलाग्दो, अर्को भने रिसाहा र साह्रैनै कठोर। दिपेन्द्रको देवयानी राणा तथा सुप्रिया शाह सँगको चहानाको भित्री कथाहरुलाई बाहिर ल्याउन कोशिस गरिएको छ। साथ साथै पुर्वराजा बिरेन्द्र वीर विक्रम शाह देवले देशलाई राजनीति दल हरुलाई हस्तान्तरण गरिएकोले दिपेन्द्रको रिसको चुमा पुगेको भनि लेखिइएको छ।
किताबका अनुसार यी दुई विषय -- आफ्नो विवाह र देशको स्थिति, ले गर्दा दिपेन्द्र चिन्तित थिए। यस विषयहरु को व्याख्या पछि भने किताबमा जेष्ठ १९, २०५८ को दरबार हत्याकाणड र त्यस हत्याकानडको अगाडि, पछडीका घटनाहरू, त्यस बखतको परिस्थिति र गतिविधिका बारे मितिक्रमानुसार वर्णण गरिएको छ। साथै, यस दुखद घटना पछिको देश व्यापी आक्रोश र नतिजाका बारे पनि लेखिएको छ। देश भरी कुरा भएको विभिन्न षडयन्त्रको बारे तर्कहरुका बारे पनि बयान गरिएको छ।
अन्तको उपसंहारमा जेष्ठ १९, २०५८ घटनाको लगभग एक वर्ष पछि लेखकहरु फेरी नेपाल आउँदाको नेपाल को स्थितिको बारे बताईएको छ। अन्तिम वाक्य पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जारी गरेका राजनीतिक "कु" का बारे लेखेर सिद्दिएको छ।
किताबका पाठहरु[सम्पादन गर्ने]
१ The Goddess and the King
२ The most powerful Woman in the country
४ Birthplace ofaDynasty
५ Star-Crossed Lovers
६ A Wedding Season
७ The Bodyguard
८ Delinquent Princes
९ The Rise of the Ranas
१० The Battle of the Bedchambers
११ The Toppling of the Ranas
१२ Devyani's Father
१३ Cracks in the Veneer
१४ A Royal Affair
१५ We All Are sufferers
१६ The Birth ofaPrince
१८ The Hindu World's Most Eligible Bachelor
१९ Poor Relations
२० The Future Queen
२१ The Games
२२ The arm wrestle
२३ Wedding Season
२४ Jeshta १९ (जेष्ठ १९)
२५ A Family Affair
२६ K Gardeko? (के गर्देको?)
२७ The ADCs
२८ The Emergency Ward
२९ Long Live the King
३० The Romanovs vs Columbine
३१ Taming an Angry Spirit
लभ एन्ड डेथ इन काठमान्डु को दुइवटा संस्करण हरु छन्। यी दुई संस्करण मध्य शुरुमा निकालिएको किताब "हार्ड कभर" मा छ भने पछि निकालिएको सुधार गरिएको संस्करण "पेपरब्याक" मा छ।
यस किताबले सन् २००२ मा "Asia-Pacific Travel Writing Award" जीतेको थियो। उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; refs with no name must have content
↑ "Love and Death in Kathmandu awards", अन्तिम पहुँच ४ अगस्ट २०१३।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=लभ_एन्ड_डेथ_इन_काठमान्डु&oldid=701107" बाट निकालिएको
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १०:३०, १५ जनवरी २०१९ मा परिवर्तन गरिएको थियो।